11 kamid ah gobollada dalka Talyaaniga oo lagusoo rogay xaalad Karaatiil ah sababa la xiriira cudurka Carona Virus.
Sunday March 08, 2020 - 10:47:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal qof ayaa cudurka dilaaga Carona ugu dhintay gobollada kala duwan ee wadanka Talyaaniga oo kamid ah wadamada qaaradda Yurub.
Wararka ka imaanaya magaalada Roma ayaa sheegaya in kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha xukuumadda lagu go'aamiyay in xaalad Karaantiil ah lagusoo rogo 11 gobol oo katirsan wadankaasi.
Wasaaradda caafimaadka Talyaaniga ayaa xaqiijisay in 233 qof ay cudurka Carona ugu dhinteen wadanka halka ay lajiifaan dad gaaraya 5883 qof waxaana laga dayrinayaa xaaladda caafimaad ee 1200 qof oo bukaan kuwaas oo cudurku fara ba'an ku hayo.
Wasiirka caafimaadka xukuumada Roma wuxuu sheegay in ay bandow kusoo rogeen 11 gobol islamarkaana aan lageli karin lagana bixi karin, gobollada xaaladda Karaantiilka ah lageliyay waxaa kamid ah gobolka Lombardy oo ay kutaal magaalada Milan oo ah caasimadda dhaqaalaha Talyaaniga.
Milan lama geli karo lagama bixi karo waxaa shaqada gabay garoomadii waaweynaa iyo hotelladii magaalada, maamulayaasha Talyaaniga waxay walaac ka muujiyay sida xowlliga ah ee uu cudurku bulshada ugu dhax faafayo.
Talyaaniga waa dalka 2aad ee dadka ugu badan uu ku dilay Carona Virus waxaana ka horreeya oo kaliya Shiinaha oo dad ka badan 3070 qof uu cudurku ku dilay, Iiraan ayaa isna ah dalka sedaxaad ee ugu dhimashada badan waxaana Carona ugu dhintay 143 qof oo ay mas'uuliyiin dowladeed kamid yihiin.